Inhlanzi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Okudingayo nokuthi ungalungisa kanjani iwayini ekhaya
Iwayini elizenzela, kunoma yini eyenziwe, idinga ukulungiswa. Le nqubo izosiza ukwenza ukunambitheka kwayo kugcwale futhi kugcinwe isiphuzo isikhathi eside. Inqubo ngokwayo ilula: uzodinga i-wort, utshwala noma i-tincture noshukela. Yini okufanele uyenze ngayo nokuthi yikuphi ubuchwepheshe bokuqinisa - sizokuthola okwengeziwe. Yini isidingo sokulungisa iwayini?
Indlela yokoma izinhlanzi, izigaba, iresiphi yokomisa ekhaya
Izinhlanzi ezomile zingatholakala kalula ezitolo eziningi, kodwa abathandi bangempela bakhetha ukupheka ukudla okunjalo ngokwabo. Ngempela, kuphela ngokulungiselela isidlo ngezandla zakho, ungaqiniseka ngokuphelele ekuphepheni kwayo. Kodwa ukwenza le nhlanzi ibe mnandi, kufanele wazi ezinye zezimiso nezimfihlo zokulungiselela.
I-Orchid Ground Saramis - ikhwalithi yaseJalimane yokuchuma
Imbewu ye-geranium ibukeka kanjani, indlela yokuziqoqa wena nokuthi ungayigcina kanjani?
Okudingayo ukwazi nge-bloer gerberas
Indlela yokuphuza i-pepper ku-greenhouse
Indlela yokupheka jamu kusuka ema-apula: zokupheka nezithombe
Isitshalo sezokwelapha Euphorbia Pallas: izakhiwo zokusebenza nezizuzisayo
Buyekeza i-incubator yamaqanda "TGB 140"
I-sweet cherry "i-Bryansk Pink"